ईतिहास भुल्नु हुदैन १७०० हजार मुलबासी मंगोललाई मारेको हत्यारा प्रचण्डलाई चिनी राखौं - MONGOL KHABAR
ईतिहास भुल्नु हुदैन १७०० हजार मुलबासी मंगोललाई मारेको हत्यारा प्रचण्डलाई चिनी राखौं
बैशाख । इतिहास भुल्नु हुँदैन । हिजोको दिनमा परिवर्तनको नाममा युद्ध गर्दै १७००० हजार मंगोलहरुलाई ख्याल ख्यालमा मारेको यि हतियारा प्रचण्डको खोप्डालाई पनि बिर्सिनु हुदैन । ए बिर गोर्खे मुलबासी मंगोल हो, राजनीतिक चेतनशील बन ! आफ्नो पुर्खा र आफ्नो दाजुभाइ दिदिबहिनीको हत्याराहरुलाई चिन ।
आफ्नो मंगोल इतिहासलाई केलाएर हेर । बाहुन छेत्रीको झोला बोकेर झोले नबन । अब पनि बाहुन छेत्रीको चाकरी गर्छौ भने तिम्रो अस्तित्व पहिचान झन नष्ट गरिदिन्छ । इतिहास साक्षी छ । हाम्रो पुर्खालाई बहादुर गोर्खे भनेर बिश्वले चिन्छ तर तिमि हामीलाई अहिले बाहुन छेत्रीहरुले डर छेरुवाको उपनाम दिईराखेको छ । के अब पनि हामी एक नहुने ?
बाहुनबादी शासनको जालो नतोड्ने ? कति सहन्छौ आफ्नो भुमिमा अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमन ? बाहुन छेत्रीको रजाई छ हाम्रो भुमिमा अहिले आऔं हातेमालो गरौ ।
हाम्रो इतिहासको खाक हामी आफैले कोरौ । आउने भाबी पुस्ताको लागी सुनौलो भबिस्यको रेखा रोजौ ।